मान्छे कसरी बढ्छ ? मान्छे बढ्न किन रोकिन्छ ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १४:०५
Vector cartoon male character growth and aging process. Happy people - toddler baby kid, teenager in glasses, young adult middle-age character and senior old men set. Age generation life cycle concept
जन्मँदा सानो बच्चा बढ्दै जाँदा लक्का जवान बन्छ । ठूलो मान्छे बन्छ । बढाइको यो क्रम नरोकिइकन बढ्दै जाने हो भने, ४०–५० वर्षको उमेरमा पुग्दा १०–१२ फिटको हुने हुन्छ ! तर त्यसो हुँदैन । करीब २०–२२ वर्षको उमेर आइपुगेपछि मान्छेको बढ्ने क्रम रोकिन जान्छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ?प्रत्येक जीवित कुराहरु बढ्ने गर्छ । प्रत्येक जीवित वस्तु आफ्नो आकार प्रकार र बनावट अनि उनीहरुले गर्ने क्रियाकलापको आधारमा बढ्ने गर्छ ।